पायल्सको लेजर सर्जरी कति सुरक्षित छ ? अन्य उपचार के के हुन् ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: १०:०१:२८
पायल्स यस्तो रोग हो जसले जुनसुकै बेला पीडा दिन सक्छ । समयमा नै उपचार भएन भने यसले निकै समस्यामा पार्न सक्छ । पायल्स उपचार गर्ने धेरै तरिका छन् । सडक किनार, भित्ता वा होर्डिङ बोर्ड जता पनि ‘पायल्सबाट छुटकारा पाउन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्’ भनेर लेखिएको पाइन्छ । तर विज्ञापनमा लेखिए जस्तै पायल्सबाट छुटकारा पाउन त्यति सहज छैन । यसको उपचारका लागि शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ भने औषधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । के पायल्सको उपचारका लागि लेजर सर्जरी गराउनु सही हो त ?